Sawirro: Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo Si Buuxda Ula Wareegtay 11 Gobol. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada islaamiga Afghanistan waxay si dardar leh ku wadaan guluf dagaaleedkooda ka dhanka ah maleeshiyaadka dabadhilifka xukuumadda Kaabul, iyagoo la wareegay inta badan magaalooyinka dalka Afghanistan.
Iska hor’imaadyo culus ka dib waxay maanta ciidamada imaarada islaamiga ah si buuxda ula wareegeen magaalada Ghanzni oo ah magaalo Istaraatiiji ah dhacdana koonfur bari dalka Afghanistan.
Mujaahidiintu waxay si buuxda ula wareegeen dhammaan xarumaha gobolka iyo saldhigyada ciidanka sida lagu sheegay war kooban oo kasoo baxay imaarada.
Warka kasoo baxay Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan waxaa lagu yiri” Mujaahidiintu waxay dagaal maalmo qaatay ka dib xalay la wareegeen dhammaan xarumaha maamulka iyo saldhigyadii ciidanka magaalada Ghazni”.
Qabsashada Taliban ee magaaladan waxay ka dhigan tahay guul wayn oo usoo hoyatay Mujaahidiinta Imaarada gobolkan ayaana noqonaya gobolkii 11 ee laga fara maroojiyo ciidamada dowladda camiilka ah ee Afghanistaan.
Dhanka wilaayada Helmanda waxay Mujaahidiintu kasoo hoyeen guula la taaban karo iyagoo iska caabiyay cadowgii duullaanka ahaa ee kusoo xadgudbay magaalada Laashkarjaah.
Dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada Laashkarjaah waxay Mujaahidiintu si xun ugu jabiyeen maleeshiyaadka dowladda waxayna ciidamada imaarada dagaalladaas kula wareegeen hub iyo gaadiid fara badan oo halkaasi ay ka carareen maleeshiyaadka xukuumadda Kaabul.
Sawirro lagu baahiyay mareegaha Internerka waxa lagu arki karaa ciidamada Mujaahidiinta oo la wareegaya xarumo dowladeed oo kuyaal duleedka degmada Laashkarjah hub, gaadiid, iyo saanado culus oo millatari.
Ciidamada imaarada islaamiga waxay xilligan si buuxda gacanta ugu hayaan 11 gobol oo dhaca waqooyiga iyo koonfur bari dalka Afghanistan, degmooyinka kusoo dhacay gacanta imaarada waa 210 degmo waxaa sidoo kale intaa dheer in ciidamada imaaradu ay la wareegeen inta badan mari xuduudyada ku teedsan wadanka Afghanistaan.
Hal toddobaad oo qura waxay imaaradu bannaanka keentay tabar darrada maleeshiyaadka dowladda oo dhanka hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha Maraykanka waxayna todobaadkaan gudihiis la wareegeen 11 gobol oo dhaca dalka.
Hoos Ka Daawo Sawirrada Ghaniimada Duleedka Lashkarjah.